World Tourism inoda rubatsiro, uye Saudi Arabia iri kupindura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » World Tourism inoda rubatsiro, uye Saudi Arabia iri kupindura
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gurukota reSaudi Tourism vanosangana nemushumiri weJamaica - uye vakafara.
Nyika yepasi rose yekushanya nevatungamiriri vayo vari kuchinja. Nyika yega yega iri kurwira kupona kwayo munguva dzehosha iyi, ukuwo Gurukota rezvekushanya muSaudi Ahmed Al-Khateeb, pamwe negurukota reJamaica vachiona mhinduro yepasi rose ichiva simba repasirese repamberi.
COVID-19 yauraya kushanya munzvimbo zhinji dzepasi kubva munaKurume 2020. Iyo indasitiri iri kuchema mari, rubatsiro uye hutungamiriri, uye HE Ahmed Al Khateeb Gurukota rezveKushanya muSaudi Arabia vakapindura nenzira hombe.
Chinyakare chinozivikanwa nemabhirioni gumi nemaviri pagore indasitiri yekushanya kwechitendero, Saudi Arabia yakagadzira iyo Red Sea Project uye yanga ichishandisa mabhiriyoni emadhora mukuvandudza kwekushanya muhumambo, uyezve ikozve kutangazve kwekushanyirwa kwenyika dzese
Semunhu mutsva wekushanya kunzvimbo dzekumadokero, nemari iripo kushandisa, Saudi Arabia yakakwanisa kubva pamwana mutsva pachivande ichienda kuchisimba chinotungamira kwekushanya kwepasirese munhu chero asati azviziva. Nyika iri kugogodza pasuwo reSaudi Arabia, uye vashanyi vakadaro vanotenderwa uye vanobatwa zvakanaka. Iyi ndiyo nzira yeArabia.
HE Ahmed Al-Khateeb, gurukota rekushanyirwa kwehumambo hweSaudi Arabia vakatora chinzvimbo chemutungamiri weSaudi Arabia General Varaidzo Chiremera pakati paMay 2016 naJune 2018. Asati ashanda saGurukota rezvehutano. Akashandawo semupi wezano ku Saudi Royal Dare.
Zvakatanga ne Iyo Gungwa Dzvuku Project iyo yakasikwa senzvimbo yakasarudzika, yekushanya kwekushanya inozobatanidza zvisikwa, tsika, uye kushanya, ichimisikidza mitezo mitsva mukusimudzira nekusimudzira Saudi Arabia pamepu yenyika yekushanya. Saudi Arabia inodyara zvakanyanya mukuvaka mamiriro-e-iyo-iyo-ehunyanzvi ekushanya nharaunda
Chete munaGunyana 2019, Saudi Arabia yakatanga kupa mavhiza evashanyi kuvagari vekumadokero kwenyika. Mukati memazuva gumi ekutanga, Saudi Arabia yakazivisa kuti 24,000 vashanyi vakasvika muHumambo kekutanga.
Yakanga iri nguva yekutanga kushanya kwechinyakare kuve kwechokwadi kune nyika yaive yakavharwa pasirese, kunze kwekushanya kwechitendero. Mari yekushanyirwa kwechitendero mu2019 yaive $ 12 bhiriyoni.
Saudi Arabia haisi chete mutambi anokosha mudunhu iri, inoita basa rakakosha mukudzikamisa hupfumi hwepasirese. Chiratidzo cheMambo 2030 chinowirirana zvakanyanya nezvinangwa zveG20 zvekusimudzira macroeconomic, kusimudzira kusimudzira, kusimudzira vanhukadzi, kusimudzira hupfumi hwevanhu, uye kuwedzera kwekutengeserana nekutengesa mari. Tourism Tourism Fund inokwana mabhiriyoni emadhora. yakatenderwa neSaudi Arabia Council yeMakurukota, inoshanda pamwe neyakavanzika uye emabhangi ekudyara kutsigira zvakavanzika-chikamu chikamu uye kukurudzira kumwe kudyara kune iyo indasitiri.
Mazhinji epasi rose ari kunetsekana nekuchengetedza kushanya mubhizinesi, nepo Saudi Arabia iri kuisa mabhiriyoni ekuisa Humambo senzvimbo yepasi rose muchikamu ichi. Kuhaya mukadzi akasimba mukushanya, CEO weWTTC Gloria Guevara semupi wezano kugurukota rinoratidza kuti nyika yakakomba, uye zvinangwa zviri pachena.
Jamaica uye Humambo hweSaudi Arabia vatanga hurukuro dzakanangana nekubatsira kudyidzana pamwe nekudyara mukushanya nedzimwe nzvimbo dzakakosha, zvichitevera misangano yakateedzana pakati peGurukota rezveKushanya, Hon. Edmund Bartlett.
Inoonekwa painodana kuSaudi Arabia, Humambo hunopindura nehukama, mari, uye mazita epasi rese akagadzirira kubatsira kana kufunga
Saudi Arabia yakava chitsauko chechipiri mu World Tourism Network, Sangano rinotsigira pasi rese kuvaka.travel nhaurirano.
Tourism uye mikana yakakura kwazvo mukati uye kuSaudi Arabia. Nhengo yeWTN Board Raed Habbis anobva kuBaseera Misangano uye Exhibition yakaunza boka revatungamiriri vepamusoro-soro vekushanya muSaudi Arabia, asi akanakisa ari kuuya.
Chido chekushanyirwa muhumambo kune vashanyi vekumadokero chiripo. Vashanyi vakagadzirira kuongorora nhoroondo yedunhu uye vanoziva-kutanga ruoko runogamuchirwa uye tsika inonakidza yeSaudi Arabia.
Teerera kune hurukuro kubva Zvita 2029